हेपेकै हो त ईयूले ? | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो हेपेकै हो त ईयूले ?
on: १६ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०९:०० तीतो मीठो
यूरोपियनहरुले त नेपाललाई निकै पो हेपे त बा ! यसरी नेपालीलाई यति धेरै ठाडै न्याँकेको, ड्याँकेको र अझ अपमानित गरेको शायद पहिलो पटक नै हो । यो त अति भयो । त्यसैले, बोली शिरोमणि हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि के कम ? बोलीले नै उनीहरुको सातो लिए ।
तर यो कसले, कसलाई, कहिले र कसरी हेपे भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि खासमा पहिले नेपालले चैं यूरोपियनलाई हेपेको रै’च है । उहिले पृथ्वीनारायण शाहले पादरीहरुलाई नेपालबाट लखेटेका रैचन् । ऐले उनीहरुले मौका पाएपछि नेपालीलाई हेप्ने मौका खोजेका रै’चन् । त्यै भएर उनीहरुकोे समानुपातिकमा खस–आर्यलाई नराख भन्ने माग रै’च । त्यही मागमा सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु नेपालसँग रिसाएका रै’चन् । हुन पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी (झण्डै ४० प्रतिशत) खस–आर्य नै छन् भन्दैमा बहुमतको शासन त लागू गर्न पाइन्न नि त ।
त्यस्तै, गाउँगाउँ धाएर नेपालीलाई खुल्ला ठाउँमा दिसापिसाब गर्न हुन्न भनेर कार्यक्रम ल्याएर सिकाउने उनीहरु । साबुनपानीले हात धुन सिकाउनेदेखि देशको विकास र राजनीतिक निकास पनि सुझाउने उनीहरु । यसरी आयोजना र पैसासमेत उनीहरुसँगै लिने । अनि सुझाव चैं नलिने गर्न मिल्च ? कसो भएर संविधानमा भने हिन्दू धर्म हटाउने सुझाव चैं लिएछन् नेपालीले । त्यो सुझाव लागू गर्न पनि नेपाली नेताहरुले नमानेको भए देशमा अझ कति अनिष्ट हुन्थ्यो होला । दरबार त गयो, कति नेताहरुको घरबार पनि जान्थ्यो होला । धन्न विदेशीहरुले नेपालीलाई माया गरिरहेकै कारणले नेताहरु टिकिरहेकै छन् । देश पनि टिकिराखेकै छ । कति नेताहरुको व्यापार पनि चलेकै छ ।
हो, उनीहरुसँग गरेको कबुलअनुसार, उनीहरुको एजेण्डाअनुसारको सबै काम कतिपय नेपाली नेता तथा भीआईपीहरुले नगरिदिएकोले उनीहरु अलिकति ठुस्केका मात्र हुन्, अलिअलि घुर्की लगाएका मात्र हुन् । समयान्तरमा उनीहरुको माग नेपाली नेता, प्रशासकहरुले पूरा गर्दै जाँदा उनीहरुको ठुस्केको पारोको ग्राफ पनि माथिबाट तल झर्दै जाला । किनकि नेताहरुले देशमा विकास ल्याउँछु भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । त्यो विकास भनेको त्यै यूरोपियन, अमेरिकन वा बेलायती मोडलकै हो । त्यसका लागि उनीहरुसँग सुझबुझ, नगद आदि सबै लिनुपर्ने नै हुन्छ । त्यस बेला उनीहरुको कुरा त सुन्दिनै पर्ने हुन्छ । अनि काम गर्छु भनेर दाम लिएपछि गर्दिनै पर्ने हुन्छ । अहिले समस्या आएको वाचा गरेर काम नगर्दिएर मात्र हो । अब काम हुँदै जाला ।
रातो/नीलो पासपोर्टधारीलाई त उनीहरुले कहाँ हेपेका छन् र ? रातो/नीलो पासपोर्टधारीलाई त उनीहरुले रातो कार्पेट ओछ्यारै स्वागत गर्ने गरेका छन्, सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
बिचरा नेताहरुलाई पनि कम्ता गाह्रो छ र पार्टी चलाउन, देश हाँक्न । भ्रष्टाचार रोकम्, आफ्नै मान्छे पर्लान् भन्ने डर । त्यसैले भ्रष्टाचारको विषयमा छुनै भएन । सदस्यले तिर्ने लेबीबाट पार्टी चलाउन सकिन्न । अनि त उनै ईयू र फियूबाटै सहयोग लिनैप¥यो । विगतमा पनि सरकारमा भएको दलबलले ईयूबाटै मोटै रकम लिएको कुरा आएको थियो । फेरि, देश विकास आफै गरौं न त भन्दा ढुकुटीमा पैसा छैन । जनताबाट निचोरेर उठाएको करबाट मुश्किलले नेता र कर्मचारीको तलब, भत्ता, गाडी, भोज यताउता गर्दैमा सकिन्छ । अब झन् प्रदेश, नगर र गाँउमा खाने मुख थपिएका छन् । केन्द्रले पैसा दिएन भनेर असन्तोषका स्वरहरु आउन थालेका छन् । अनि विकास गर्ने पैसो कहाँबाट ल्याउने ?
गाउँमा जसरी गर्जो पर्दा मन परे नि नपरे नि सहयोग माग्न जमीनदारकहाँ नै पुग्नुपर्छ, त्यसैगरी सरकारले पनि विकास गर्ने पैसा माग्न ईयू वा फियू वा यस्तैउस्तै स्रोतकहाँ नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी आएको पैसाले कसरी के काम गर्छ, के गर्दैन भनिरहनै परेन । त्यसैले पनि शायद प्रम हुनुअघि नै ओलीले विकास ल्याउन त स्रोत नखुलेको र अशुद्ध सम्पत्ति सुनपानी छर्केर भए पनि शुद्ध बनाएर पैसा ल्याउने कुरा गरेका थिए । अब के गर्छन् हेरौं ।
त्यसैले ‘तातोपानी तताएर ल्याऊ, नत्र……….!’ नत्र के त ? भन्दा ‘चिसै पानीले नुहाइदिन्छु’ भनेजस्तै हुन्छ यो ईयूको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको वक्तव्यको कुरा पनि । किनकि ईयूलाई नेपाल नभै हुन्न, नेपालमा उसका आफ्नै एजेण्डा छन् । नेपाललाई पनि ईयू नभै हुन्न, किनकि उनीहरुसामु गएर लम्पसार परेर आयोजना नभए पैसा माग्नु छ । उनकै देशमा भ्रमणको तारतम्य मिलाउनुछ । त्यतैबाट आएको पैसाले नयाँ गाडी चढ्नु छ । १ रुपैयाँको खर्चलाई हजारको बिल बनाएर खानु छ ।
फेरि यूरोपियनहरुले असामान्य नेपाली अर्थात् नेता र प्रशासकहरुलाई त सधैं माया गरिरहेकै छन् । उनीहरुले सामान्य नेपालीलाई मात्र पो हेपेका हुन् त । किनकि सामान्य नेपालीले उनीहरुको कुनै पनि काम गर्दिन सक्तैन । अझ खासमा भन्ने हो भने अरुलाई भन्दा पनि यूरोपियनहरुले हेपेको त हरियो पासपोर्टवालाहरुलाई मात्र पो हो । रातो/नीलो पासपोर्टधारीलाई त उनीहरुले कहाँ हेपेका छन् र ? रातो/नीलो पासपोर्टधारीलाई त उनीहरुले रातो कार्पेट ओछ्यारै स्वागत गर्ने गरेका छन्, सहयोग गर्ने गरेका छन् । ईयूले स्वीट्जरल्याण्ड, भारत, चीन आदिलाई पनि हेप्छ र ? अनि सामान्य नेपालीलाई त ईयूले मात्र हेप्ने पनि होइन । पाएसम्म, भ्याएसम्म भारत, अमेरिका, बेलायत आदि सबैले पो हेप्छन् त । किनकि सामान्य नेपालीसँग हरियो पासपोर्ट मात्र छ । हरियो पासपोर्टलाई उनीहरु चिन्दैनन् । त्यसैले यी देशहरुले सामान्य नेपालीलाई नहेप्ने बनाउने एउटै उपाय भनेको हाम्रो हरियोजति सबै पासपोर्टलाई रातो बनाइदियो भनेमात्र हो ! रातो सरकार आएको छ । पासपोर्ट पनि सबैको रातै गर्दिन्छ कि न ? ओलीको गर्जन सुन्दा पनि त्यस्तै लाग्छ । त्यसपछि हेरम्ला नि त कस्ले हेप्छ नेपालीलाई ?
रातों निदो ््‌््््‌् श्रेय,,
निदो निलो अनि हरियो पासपोर्ट को बारे मा बुझाउनुस् ।
Every Nepali la kasri hapiyraw basko chan tyo taw europe hos ya Australia jaha sukai basna Nepali employe lai sodhnu aphno desh undeveloped hunu ko pida desh ma kam gari apahi desh ko power bidesh ko lagi kam garnu parcha ani haypidaina taw
हेप्यो राजा हेप्यो ………..
कडा आयो त यो : ‘तातोपानी तताएर ल्याऊ, नत्र……….!’ नत्र के त ? भन्दा ‘चिसै पानीले नुहाइदिन्छु’
धन प्रसाद बोहोरा
भने पछि अब हाम्लाई पनि ” रातो ” पासपोर्ट चाहियो !!! नेपाल छाडेर विदेश जा भन्न खोज्या त हैन नि 😀